MUTEMO WEMAZANO PANO planetlibre.es - Zvimwe
iphone 7 maikorofoni isiri kushanda
nei maTunes asingakwanise kuona iphone
foni yangu haibatanidzi kuchitoro cheapp
app chitoro chisina chinhu screen fix
Yakavanzika Policy (Kunze kweEU)
Chakavanzika Chiziviso chevagari veCalifornia
Yakavanzika Policy yeVashandisi veEU
NZIRA DZAKANAKA (KUNZE KWENYIKA)
Zuva Rinoshanda: Chivabvu 25, 2018
planetlibre Dhijitari Media, LLC d / b / a planetlibre Maindasitiri, vanobatana navo uye vanobatsira (iyo 'planetlibre' , 'isu' kana 'isu' ) inokoshesa kuvanzika kwevashandisi vedu uye vanyoreri. Isu tinovavarira kuve pachena pamusoro pekuti tinounganidza nekushandisa sei ruzivo rwako, kuchengetedza ruzivo rwako rwakachengeteka uye kukupa iwe sarudzo dzine musoro. Iyi Yakavanzika Policy ( 'Mutemo' ) inotsanangura zvakavanzika maitiro e www.mundodar webhusaiti (iyo 'Saiti' ), iyo iri yavo uye inoshandiswa neplanetlibre. Iyi Bumbiro inoitirwa kuti ikubatsire kuti unzwisise kuti ndeupi ruzivo rwunounganidzwa naplanetlibre, nei tichiuunganidza uye zvatinoita nawo.
Iyi Bumbiro inoshanda kune edu epamhepo ruzivo maitiro eSiti nekuremekedza kune vese vashandisi kunze kwevashandisi mukati meEuropean Union. Iyi Bumbiro haishande kune rako dhata rakaunganidzwa kuburikidza chero echitatu-bato mawebhusaiti kana maapplication, kusanganisira mawebhusaiti iwe aunogona kuwana kuburikidza neSiti. Iwo mawebhusaiti uye maapplication anogona kunge aine yavo yega marongero epamoyo, ayo atinokukurudzira kuti uverenge usati wapa chero ruzivo rwemunhu paari kana kuburikidza navo. Zvimwe zvinopihwa paSiti yedu, zvinogona kunge zviine zvimwe zviziviso nezve maitiro ruzivo uye sarudzo. Ndokumbirawo kuti muverenge izvo zvekuwedzera zvakavanzika kuti munzwisise kuti zvingashandise sei kwamuri.
Ndokumbirawo kuti muverenge Policy iyi zvakanyatsonaka kuti munzwisise edu marongero nemaitiro zvine chekuita neruzivo rwenyu uye kuti tichazvibata sei. Kana iwe usingabvumirani nemitemo yedu nemaitiro, usashandise iyo Saiti. Nekushandisa iyo Saiti, iwe unobvumirana neiyi Policy. Iyi Bumbiro inogona kuchinja nguva nenguva. Kuenderera kwako kwekushandisa kweSiti mushure mekunge taita shanduko kunoonekwa sekugamuchirwa kweshanduko idzi, saka ndokumbira utarise Policy nguva nenguva kuti ivandudzwe.
VANA PASI PEMAZANA EGORE REGumi nematatu
Iyo Saiti haina kuitirwa vana vari pasi pemakore gumi nematatu ekuberekwa, uye isu tisingazivi kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kuvana vari pasi pemakore gumi nematatu. Kana tikadzidza isu takaunganidza kana kugamuchira ruzivo rwemunhu kubva kumwana ari pasi pemakore gumi nematatu pasina kusimbiswa kwemvumo yevabereki, tinodzima ruzivo irworwo. Kana iwe uchitenda isu tinogona kuve neruzivo kubva kana kana nezve mwana ari pasi pegumi nematatu, ndapota taura nesu pa zvakavanzika@planetlibre.org .
INFORMATION TINOTORORA UYE TINOTUNGAMIRA SEI
Isu tinogona kuunganidza ruzivo kubva uye nezve iwe kana iwe uchifambidzana uye uchishandisa iyo Saiti. Ruzivo urwu runogona kusanganisira ruzivo rwemunhu (semuenzaniso zita, kero yeemail, kero yepositi, nhamba yefoni uye chero zvimwe zvekufambidzana), ruzivo rwehunyanzvi (semuenzaniso IP kero, mhando yebrowser, chiziviso chemidziyo) neruzivo rwekushandisa (semapeji ewebhu aunoshanyira, ma ads aunodzvanya on). Tinogona kusanganisa aya marudzi eruzivo pamwechete, uye pamwe chete tinongedzera kune ese aya ruzivo mune ino Yakavanzika Policy se 'Ruzivo' . Ruzivo runogona kuunganidzwa sezvakatsanangurwa pazasi uye kuburikidza nekushandisa makuki, web beacon, pixels, uye humwe hwakafanana matekinoroi nesu kana nemamwe makambani akamirira isu. Pazasi nderudzi rweRuzivo rwatinogona kutora.
kana iwe uchinyoresa pamwe kana kushandisa iyi Saiti, kana kunyorera kune chero sevhisi paSiti, tinogona kukukumbira iwe kuti upe ruzivo rwega nezve iwe ungazivikanwa, senge zita, kero yepositi, e-mail kero, nhamba yefoni, kana chero mamwe manyorerwo
kana iwe ukashandisa Saiti kutaurirana nevamwe kana kutumira, kurodha, kuratidza kana kuchengeta chero zvemukati senge makomendi, mapikicha, mavhidhiyo, maemail, zvakabatanidzwa, mazwi ezvekushandisa, uye zvimwe zvemukati zvakagadzirwa newe (pamwe chete, 'Mipiro Yevashandisi') pane veruzhinji nzvimbo dzeSiti. Yako Yekushandisa Mipiro inogona kuendeswa kune vamwe uye isu hatigone kudzora zviito zvevamwe mapato avo vaungasarudze kugovana neMushandisi Mipiro. Isu zvakare hatigone kudzivirira kumwe kushandiswa kweiyi Ruzivo kana yaitwa pachena.
isu tinogona kukukumbira iwe kuti upe Ruzivo kana iwe uchipinda mumakwikwi kana sweepstake inotsigirwa nesu kana kupindura kuongororwa kwatinogona kutumira uye kukumbira kupedzisa paSiti.
paunotaurirana nesu kuti utaure dambudziko neSiti, kana chero mimwe mibvunzo yakawanda. Tinogona kuchengeta zvinyorwa uye makopi etsamba yako (kusanganisira mae-mail kero, nhamba dzefoni, uye chero rumwe ruzivo rweumwe ruzivo iwe rwawakapa).
paunosaina kune chero akabhadharwa masevhisi kana kuisa chero maodha paSiti, isu tinogona kuchengeta ruzivo rwekutenga iwe kwaunoita kuburikidza neSiti uye nekuzadzikiswa kwechero mirairo (ona kuti ungangodikanwa kuti upe ruzivo rwemari usati waisa odha. kuburikidza neSiti).
paunoshandisa imwe Saiti, senge yemibvunzo yekutsvaga, nhoroondo yekuona, kuona peji, kuona zvirimo zvatinoita kuti zviwanikwe, kana kuisa chero ma plug-ins edu.
Unyanzvi, mashandisiro, uye ruzivo rwekuongorora.
Ruzivo rweNzvimbo. Isu tinounganidza ruzivo rwechokwadi-nguva nezve yako nzvimbo, senge nyika yako, kana iwe uchipa iyo kana kuburikidza neruzivo rwechigadzirwa (senge IP kero), kana nzvimbo yedhizaini yako kana iwe uchinge wasvika Saiti nefoni yako mbozhanhare.
TINOSHANDISA SEI Ruzivo RWAKO
Isu tinoshandisa Ruzivo rwatinotora pamusoro pako kana iwe rwaunotipa kwatiri nekuda kwezvinangwa zvinotsanangurwa muiyi mutemo kana kuburitswa panguva yekuunganidza kana nemvumo yako, kusanganisira zvinotevera zvinangwa:
Govera kana kuongorora mashandisiro ako eSiti uye nezviri mukati, zvigadzirwa, zvirongwa, uye masevhisi.
Zadzisa zvikumbiro zvako uye chero chimwe chinangwa chaunozvipa iwe, kusanganisira kutaurirana newe nezve zvaunotenga kana kutengesa.
Kukupa ziviso nezve account yako kana kunyorera.
Tumira ruzivo nezve kukwidziridzwa, zvipo, uye Saiti maficha.
Kukuzivisa iwe kana iwe uchinge wahwina mumwe wemakwikwi edu kana sweepstakes.
Zivisa iwe kana Zvivakwa zveSiti zviripo, uye nezve shanduko kune chero zvigadzirwa kana masevhisi atinopa kana kupa zvakadaro.
Ipa, gadzira, gadzirisa, gadzirisa, chengetedza, uye gadzirisa ruzivo rwako nezvipo zvedu paSiti.
Fungidzira kukura kwevateereri vedu uye maitiro ekushandisa.
Chengetedza ruzivo nezve zvaunofarira, zvichitibvumidza kugadzirisa yedu Saiti zvinoenderana nezvaunoda iwe wega.
Kurumidza kutsvaga kwako.
Dzivirira kubva, kuziva, uye kudzivirira kubiridzira uye zvimwe zvisiri pamutemo
Kuziva iwe kana iwe uchishandisa Saiti.
Kupa, kushambadza, uye kushambadza zvigadzirwa, zvirongwa, uye masevhisi kubva kwatiri nevatinoshamwaridzana navo, vatinoshanda navo bhizinesi, uye sarudza vechitatu mapato angave anofarira iwe. Tinogona zvakare kushandisa ruzivo rwatinotora kuti tiratidze kushambadza kune vashambadzi vedu vanotarisa vateereri.
Ita zvisungo zvedu uye simbisa kodzero dzedu dzinobva kune chero zvibvumirano zvakapinda pakati pako nesu, kusanganisira kubhadhara uye kuunganidza.
Tsvaga, uongorore, uye udzivise zviitiko paSiti yedu zvinogona kutyora mazwi edu, zvinogona kuve zvekunyepedzera, kutyora kodzero, kana mimwe mitemo kana izvo zvingave zvisiri pamutemo, kutevedzera zvinodiwa nemutemo, uye kuchengetedza kodzero dzedu uye kodzero uye kuchengetedzeka vashandisi vedu nevamwe.
TINOGADZANA SEI UYE KUZIVISA Ruzivo RWAKO
Isu tinogona kugovana uye kuburitsa yakaunganidzwa uye de-yakaziviswa Ruzivo nezve vashandisi vedu pasina kurambidzwa. Uye zvakare, isu tinogona kugovana nekuzivisa Ruzivo rwatinotora, kana iwe unopa nenzira dzinotevera kana kune chero chimwe chinangwa chakaziviswa panguva yekuunganidza:
Nemvumo Yako. Tinogona kuzivisa ruzivo rwako kana iwe ukatipa nemvumo yako kuti tidaro.
Vanopa Sevhisi. Vemakontrakita edu, vanopa rubatsiro, vanopa zvemukati, uye vamwe vanhu vechitatu vatinoshandisa kutsigira bhizinesi redu vanogona kuwana Ruzivo kuti vabatsire kuita masevhisi avari kutiitira, akadai sekuti: kugadzira, kuchengetedza, kubata, uye kuendesa Yedu Saiti, zvigadzirwa, uye masevhisi; kuitisa kushambadzira, kubata mubhadharo, email uye kuzadzikisa odha; kupa makwikwi; kuitisa tsvagiridzo uye analytics; uye vatengi.
Uridzi Hutsva. Kune mutengi kana mumwe anotsiva pachiitiko chekubatana, kupatsanurwa, kugadziriswazve, kuronga patsva, kumisikidza kana kumwe kutengesa kana kuchinjisa kweimwe kana yese midziyo yedu, kungave kuri kuenda kunetsa kana sechikamu chekubhuroka, kudzima kana kuita kwakadaro, mukati irwo ruzivo rwakachengetwa nesu nezve yedu Saiti nevashandisi iri pakati pezvinhu zvakaendeswa.
iphone 6 pamwe nenyaya dzekhibhodi
Sites Dzakabatanidzwa. Iyo Saiti inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe masayiti, kusanganisira Social Media Sites. Tinogona kusanganisa yemagariro midhiya yekushandisa chirongwa chinosangana kana plug-ins ('Plug-ins') kubva pasocial network, kusanganisira Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest nevamwe, muSiti yedu. Plug-ins inogona kuendesa ruzivo nezve iwe kune iyo plugg-in yacho inoteerana chikuva pasina chiito newe. Ruzivo urwu runogona kusanganisira yako chikuva mushandisi yekuzivisa nhamba, ndeipi webhusaiti iwe yauri, uye zvimwe. Kupindirana nePulagi-mukati kunofambisa ruzivo kwakanangana neiyo plug-in yemagariro network uye iro ruzivo runogona kuoneka nevamwe papuratifomu. Plug-ins inodzorwa neakazvimiririra epuratifomu mutemo, uye kwete nePolisi yedu.
Sponsors uye co-kukwidziridzwa. Isu dzimwe nguva tinopa zvemukati kana zvirongwa (semuenzaniso, makwikwi, sweepstakes, kukwidziridzwa, kana kusangana kweMidhiya Saiti Saiti) izvo zvinotsigirwa kana kuisirwa zita nevechitatu mapato. Nekuda kwehukama uhu, mapato echitatu anounganidza kana kuwana Ruzivo kubva kwauri kana iwe uchiita chiitiko ichi. Hatina simba pamusoro pevanhu vatatu ava vanoshandisa ruzivo urwu. Tinokukurudzira kuti utarise kuvanzika kwekuvanzika kwechero wechitatu bato kuti udzidze nezve yavo data maitiro usati watora chikamu muchiitiko ichi.
Zvemutemo uye Kuteedzera Kwemutemo Zvinangwa. Tinogona kuzivisa Ruzivo mukupindura maitiro epamutemo, semuenzaniso mukupindura kudare redare kana sabhuku, kana kupindura chikumbiro cheanosungira mutemo. Tinogona zvakare kuzivisa ruzivo irworwo kune vechitatu mapato: (i) nechinangwa chekudzivirira kubiridzira uye kudzikisira njodzi, (ii) kwatinotenda kuti zvakakosha kuongorora, kudzivirira, kana kutora matanho maererano nezviito zvisiri pamutemo, (iii) kusimbisa kodzero dzedu dzinobva kune chero zvibvumirano zvakapinda pakati pako nesu, kusanganisira Mitemo yekushandisa, Mutemo uyu, uye kubhadhara uye kuunganidza, (iv) kana tichitenda kuti kuzivisa kunokosha kana kuti kwakakodzera kuchengetedza kodzero dzedu, chivakwa, kana kuchengetedzeka kana izvozvo yevatengi vedu, vashandisi, makondirakiti kana vamwe, (v) sezvimwe zvinodiwa nemutemo.
Kushambadzira Kutaurirana uye Kugovana neVatatu Mapato. Unogona kugadzirisa zvaunofarira zvine chekuita nekugamuchira kumwe kutaurirana kwekushambadzira kubva kwatiri, uye kugovana kwedu ruzivo rwemunhu wega nevechitatu mapato. Unogona kuzviita nekutibata nesu pa zvakavanzika@planetlibre.org . Iwe unogona zvakare kusarudza kubva mukugamuchira email kushambadzira kutaurirana, nekutevera iyo 'kuzvinyoresa' mirairo yakapihwa mune yega email yaunogamuchira kubva kwatiri. Iwe unogona zvakare kugadzirisa ako ekushambadzira Notices pane yako nhare mbozha kuburikidza neyako kifaa kana app magadziriro.
Ad Sarudzo. Isu tinogona kushanda nevechitatu mapato kuzivisa kushambadzira, uye kuita mukuunganidza dhata, kuburitsa, saiti analytics, kushambadzira kushambadzira uye kuyera kwekupindura paSiti yedu uye kune echitatu webhusaiti uye kunyorera kwenguva. Aya mapato echitatu anogona kushandisa makuki, web beacon, pixels, uye humwe hunyanzvi hwakafanana kuita chiitiko ichi. Ivo vanogona zvakare kuwana ruzivo nezve mawebhusaiti iwe aunoshanyira, kunyorera iwe kwaunoshandisa, uye rumwe ruzivo kubva kune ako mabhurawuza nemidziyo kuitira kuti uburitse kushambadza kunogona kuve kunoenderana nezvako zvaunofarira mukati uye kunze kwedu Saiti uye kune mamwe mapuratifomu. Iyi mhando yekushambadzira inozivikanwa sekufarira-kwakavakirwa kushambadzira.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kufarira-kwakavakirwa kushambadza pane desktop yako kana nharembozha, uye kugona kwako kusarudza kunze kwerudzi urwu rwekushambadzira nevechitatu mapato, ndapota shanya Network Kushambadzira Initiative uye / kana DAA Yekuzvidzora-Yega Chirongwa chePamhepo Maitiro Ekushambadzira . Kuti udzidze zvakawanda nezve kufarira-kwakavakirwa kushambadzira mune nharembozha maapuro uye maitiro ekusarudza kunze kwerudzi urwu rwekushambadzira nevechitatu mapato, unogona kushanyira AppChoices . Ndokumbira utarise kuti chero sarudzo dzekusarudza dzaunogona kushandisa kuburikidza nezvirongwa izvi dzinongoshanda chete kushambadziro-kwakavakirwa nevechitatu mapato iwe aunosarudza asi zvichiri kubvumidza kuunganidzwa kwedata kune zvimwe zvinangwa, senge analytics, research, uye mashandiro. Iwe unogona zvakare kuenderera nekugamuchira kushambadzira, asi kushambadza kwacho kunogona kunge kusinei nezvavanofarira.
California Zvakavanzika Kodzero. California Civil Code Chikamu 1798.83 inobvumidza vashandisi veSiti yedu vagari veCalifornia kuti vakumbire rumwe ruzivo maererano nekuzivisa kwedu kwega ruzivo kune vechitatu mapato kwavo kwakananga kushambadzira. Kuti uite chikumbiro chakadai, ndapota taura nesu pa zvakavanzika@planetlibre.org .
MOTO WOKOKOKA (KUNZE KWENYIKA)
Cookies uye Humwe Technologies. Isu, nevatinobatana navo, vanopa rubatsiro rwechitatu, uye vatinoshanda navo bhizinesi vanogona kutumira 'makuki' kukomputa yako kana kushandisa matekinoroji akafanana kusimudzira ruzivo rwako rwepamhepo paSiti yedu uye kuburikidza nekushambadzira kwedu uye midhiya paInternet uye nharembozha.
Cookies madiki emafaira emafaira ane ruzivo rwunotorwa pasi kune chako chishandiso paunoshanyira webhusaiti, kusanganisira yedu Saiti. Cookies anobva adzoserwa kunzvimbo yekutanga yewebhu pane ako anotevera kushanya kune iyo duraini. Mazhinji mapeji ewebhu ane zvinhu kubva kunzvimbo dzakawanda dzewebhu saka paunoshanyira webhusaiti, bhurawuza rako rinogona kugamuchira makuki kubva kune akati wandei masosi. Cookies anobatsira nekuti anotendera webhusaiti kuziva mudziyo wemushandisi. Cookies inokutendera kuti ufambe mawebhusaiti zvakanaka, rangarira zvaunofarira uye kazhinji kugadzirisa ruzivo rwevashandisi. Izvo zvinogona zvakare kushandiswa kugadzirisa kushambadzira kune zvaunofarira kuburikidza nekuteedzera kubhurawuza kwako kune mamwe mawebhusaiti. Session makuki anobviswa otomatiki iwe paunovhara browser rako uye zvinoramba makuki zvinogara pane chako chishandiso mushure mekuvharwa kwebrowser (semuenzaniso kurangarira zvaunofarira zvemushandisi paunodzokera kuSiti).
Tinogona zvakare kushandisa mapikiseli kana 'web mabacon' ayo anoongorora mashandisiro ako Saiti yedu. Web beacon madiki emagetsi mafaira akabatanidzwa muSiti kana edu kutaurirana (semuenzaniso maemail) anotibvumidza isu, semuenzaniso, kuverenga vashandisi vakashanyira iwo mapeji kana kuvhura email kana kune zvimwe zvinoenderana manhamba. Tinogona zvakare kusanganisa 'Software Development Kits' ('SDKs') mune edu mashandiro ekuita zvakafanana mabasa sekuki uye web beacon. Semuenzaniso, ma SDK anogona kutora ruzivo rwehunyanzvi uye rwekushandisa senge masisitimu enharembozha nekubatana kwako neSiti uye nemamwe maapplication efoni.
Tinogona kushandisa makuki uye mamwe matekinoroji kuti tibatsire kuziva bhurawuza rako kana chishandiso, chengetedza zvaunofarira, kupa zvimwe zveSite maficha, uye kuunganidza Ruzivo nezve kudyidzana neSiti yedu, zvinyorwa zvedu, uye kutaurirana kwedu.
Tinogona zvakare kushandisa makuki uye mamwe matekinoroji (i) kupa, kuvandudza, kuchengetedza, kugadzirisa, kuchengetedza, uye kugadzirisa yedu Saiti, zvigadzirwa, zvirongwa, uye masevhisi uye kushandisa bhizinesi redu, (ii) kuita analytics, kusanganisira kuongorora uye chirevo nezvekushandiswa uye mashandiro eSiti yedu uye zvekushambadzira zvinhu, (iii) kudzivirira kubva, kuona, uye kudzivirira kubiridzira uye zvimwe zvisiri pamutemo, (iv) kugadzira dhata rezvikamu zvemapoka kana zvikamu zvevashandisi vedu, (v) kuwiriranisa vashandisi. pamidziyo yese, vanobatana navo, vezvemabhizimusi, uye sarudza vechitatu mapato, uye (vi) kwatiri nevatinoshamwaridzana navo, vatinoshanda navo bhizinesi, uye sarudza vechitatu mapato kunongedza, kupa, kana kutengesa, zvigadzirwa, zvirongwa, kana masevhisi. Cookies uye mamwe matekinoroji zvakare anofambisa uye kuyera mashandiro ezviziviso zvinoratidzwa kana kuendeswa nesu kana / kuburikidza nesu uye / kana mamwe maratidziro kana saiti. Nekushanyira Saiti, kunyangwe semunhu akanyoreswa mushandisi kana neimwe nzira, iwe unobvuma, uye unobvuma kuti urikutipa mvumo yako yekutevera zviitiko zvako uye kushandisa kwako Saiti kuburikidza nehunyanzvi hwatsanangurwa pamusoro, pamwe nehunyanzvi hwakafanana hwakagadzirwa mune ramangwana. , uye kuti tishandise matekinoroji akadaro ekutevera emaemail atinotumira kwauri.
Unogona kugadzirisa browser rako kuramba makuki. Kudzora makuki kuburikidza nebrowser kudzora hakugone kudzora mashandisiro edu emamwe matekinoroji. Ndokumbira utarise mabhurawuza ako kuti uwane rumwe ruzivo. Nekudaro, kuvharira makuki kana tekinoroji yakafanana inogona kukutadzisa iwe kuwana zvimwe zvemukati medu kana maficha ari paSiti. Isu parizvino hatipindure kune Usateedzere masaini nekuti yunifomu tekinoroji chiyero hachisati chagadzirwa. Isu tinoramba tichiongorora matekinoroji matsva uye tinogona kutora chiyero kana imwe yagadzirwa.
Kugadzirisa Cookies uye Dzimwe Technologies
Chaizvoizvo Zvakakodzera maKuki
Aya makuki akakosha kuitira kuti ugone kutenderera neSiti uye kushandisa maficha. Pasina makuki aya, masevhisi awakumbira (senge kufamba pakati pemapeji) haakwanise kupihwa. Iyi inotevera rondedzero inoratidza mimwe mienzaniso yemhando idzi dzekuki.
Cookie Kunobva: planetlibre.es
Isu tinoshandisa iyo data yakachengetwa mune ino kuki kune system manejimendi, kusimudzira kuchengetedzeka, uye nekupa mukana wekudikanwa kwekushanda pane ino saiti
Rimwe Ruzivo: Session kuki (inopera kana bhurawuza yakavharwa)
Isu tinoshandisa analytic makuki kuongorora mashandisiro anoita vashanyi vedu Saiti uye kuongorora mashandiro avo. Izvi zvinotibvumidza isu kuti tipe chiitiko chepamusoro-soro nekugadzirisa yedu yekupa uye nekukurumidza kuona nekugadzirisa chero nyaya dzinomuka. Semuenzaniso, isu tinogona kushandisa mashandiro emakuki kuti tione kuti ndeapi mapeji anonyanya kufarirwa, ndeipi nzira yekubatanidza pakati pemapeji inonyanya kushanda, uye kuona kuti nei mamwe mapeji achigamuchira mameseji ekukanganisa. Tinogona zvakare kushandisa aya makuki kusimudzira zvinyorwa kana masevhisi eSiti isu atinofunga kuti achanakidza kwauri zvichienderana nekushandisa kwako Saiti. Idzo ruzivo rwunounganidzwa nekuki idzi harwunobatanidzwa nerako ruzivo rwepamoyo nesu kana nemakontrakta edu uye runongoshandiswa mune yakazara uye de-inozivikanwa fomu. Iyi inotevera rondedzero inoratidza mimwe mienzaniso yemhando idzi dzekuki.
Cookie Kunobva: Google Analytics
Aya makuki anoshandiswa kuunganidza ruzivo nezve vashanyi vanoshandisa yedu saiti. Isu tinoshandisa ruzivo kuunganidza mishumo uye kutibatsira kuvandudza saiti yedu. Makuki anounganidza ruzivo mune fomu risingazivikanwe, kusanganisira huwandu hwevashanyi vesaiti, uko vashanyi vauya kune saiti kubva uye iwo mapeji avakashanyira.
Dzvanya apa kuti uwane zvakavanzika zveGoogle maererano neGoogle Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Unogona kusarudza kutevera neGoogle Analytics nekushanya: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Cookie Kunobva: Mouseflow
Isu tinoshandisa Mouseflow kutora isingazivikanwe ruzivo rwevashandisi mashandiro evashanyi vewebhusaiti ari kudyidzana nezvinhu zvepa peji. Isu tinoshandisa iyi isingazivikanwe data kuendesa mhinduro kune yakavandudzwa saiti ruzivo kune vashandisi.
Dzvanya apa kuti uone Inzira yekuvanzika yeMouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
Kana iwe uchida kusarudza kubuda, unogona kuzviita pa https://mouseflow.com/opt-out.
Isu tinoshandisa makuki kukupa iwe nekumwe kushanda. Semuenzaniso, kutarisa zvemukati mevhidhiyo, hova dzinorarama, kana kuyeuka sarudzo dzaunoita uye nekupa zvinowedzeredzwa uye zvimwe zvemunhu maficha. Aya makuki haana kushandiswa kuteedzera kubhurawuza kwako pane mamwe masaiti. Iyi inotevera rondedzero inoratidza mimwe mienzaniso yemhando idzi dzekuki.
Cookie Kunobva: Google Ajax Kutsvaga
Iyi cookie inopa ne typehead ficha inowanikwa mumabhawa mukati meSiti. Izvi zvinopa mazwi akakosha mazano uye zvinobatsira kugadzirisa mibvunzo yekutsvaga.
Session kuki (inopera kana bhurawuza yakavharwa)
Kushambadzira makuki (kana kunanga makuki) unganidza ruzivo nezve maitiro ekubhurawuza ane chekuita neyako kifaa uye anoshandiswa kuita kushambadza kuve kwakakodzera iwe uye zvaunofarira. Aya makuki zvakare anoyera kushanda kwekushambadzira mishandirapamwe uye nekuteedzera kana kushambadza kwakaratidzirwa nemazvo Iyi inotevera rondedzero inoratidza mimwe mienzaniso yemhando idzi dzekuki.
Cookie Kunobva: DoubleClick
DoubleClick inoshandisa makuki kunatsiridza kushambadza. Zvimwe zvekushandisa zvakajairika ndezvekutsvaga kushambadzira zvichibva pane zvinoenderana nemushandisi, kugadzirisa kunyorera pamushandirapamwe, uye kudzivirira kuratidza kushambadzira izvo mushandisi akatoona.
Dzvanya apa kuti uwane zvakavanzika zveGoogle zvine chekuita ne DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Unogona kubuda mukutevera ne DoubleClick nekushanya https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Cookie Kunobva: Facebook Pixel
Isu tinoshandisa iyo pixel yeFacebook senzira yekunzwisisa zvirinani vashandisi vedu, kugadzirisa zvirimo uye kushambadza, kupa maficha enhau uye kuongorora traffic kune ino saiti. Iyo yakaunganidzwa data inoramba isingazivikanwe. Izvi zvinoreva kuti hatigone kuona iro rega data remunhu chero mushandisi. Nekudaro, iyo yakaunganidzwa data inoponeswa uye kugadziriswa neFacebook.
Facebook inokwanisa kubatanidza iyo data neakaunti yako yeFacebook uye kushandisa iyo data kuzvinangwa zvavo zvekushambadzira, zvinoenderana nemutemo wavo wepachivande unowanikwa pasi pe: https://www.facebook.com/about/privacy/
Kana iwe uchida kusarudza kubuda, unogona kuzviita pa https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Kushambadzira maKuki anogona kushandiswa nemasocial media masaiti akasunganidzwa kubva kuSiti yedu, akadai se'Govana 'mabhatani kana akadzika midzi odhiyo / vhidhiyo vatambi. Aya makuki anopawo basa rakakumbirwa. Aya masocial media masosi anoisa pasi kushambadzira makuki zvese paunoshanyira Saiti yedu uye kana iwe uchishandisa masevhisi avo uye kufamba uchibva kuSiti yedu. Maitiro ekuki ezvimwe zveaya masaiti enhau akarongwa pazasi:
KUSVIRA, KURURamisa NOKUTSVAGA ZITA RAKO
Kuti ubvunze pane chako ruzivo rwatakatora nezvako online kubva kuSiti iyo inoiswa Yakavanzika Policy kana kugadzirisa yakadaro yega ruzivo, unogona titumire email ku zvakavanzika@planetlibre.org . Iwe unogona kukumbira uye uwane kubviswa kweMubatsiri Wako Mipiro nekutumira tsamba zvakavanzika@planetlibre.org nechikumbiro chako uye nekutsanangudza iyo yakatarwa Mipiro yeMushandisi yaunotsvaga kubvisa. Isu hatigone kukumbira chikumbiro chekuchinja kana kudzima chero ruzivo kana tichitenda kuti zviito izvi zvinotyora chero mutemo kana zvinodiwa nemutemo kana kukonzeresa kuti ruzivo rwuve rusirizvo. Kubviswa kweMupiro weVashandisi kubva paSiti hakuiti kuti kubviswa kwakazara kana kwakazara kweMipiro yeMushandisi kubva kuSiti sezvo makopi anogona kuramba achionekwa mumapeji akachengetedzwa uye akachengetedzwa kana angangodaro akateedzerwa kana kuchengetwa nevamwe vashandisi veSiti. Iwe unogona kuzvinyoresa kubva kune chero matsamba enhau kana akasiyana emaemail ekushambadzira chero nguva nekudzvanya pane izvo 'kuzvinyoresa' zvinongedzo zvinopihwa mune akadaro kutaurirana. Iwe haugone kubuda mukutaurirana zvine chekuita neSiti, senge kusimbiswa kweakaundi, zvisimbiso zvekutenga uye mameseji ekutungamira, sekureba sekunge iwe wakanyoreswa neSiti.
KUCHENGA Ruzivo RWAKO
The Site is hosted in Zimbabwe. Tinogona kudzora kuwanikwa kweSiti kana chero sevhisi kana chigadzirwa chinotsanangurwa paSiti kune chero munhu kana nzvimbo yenzvimbo chero nguva. Kana ukasarudza kuwana iyo Saiti kubva kunze kweUnited States, unozviita nenjodzi yako wega.
Isu takaita matanho akakodzera ehunyanzvi uye esangano ekuchengetedza iyo Saiti. Nehurombo, kufambiswa kweruzivo kuburikidza neInternet uye mapuratifomu efoni hakuna kuchengetedzeka zvakakwana. Kunyangwe isu tichitora zvinodzivirira zvine hungwaru kuchengetedza ruzivo rwako, hatigone kuvimbisa kuchengetedzeka kweruzivo rwako. Chero kupi zvako kutapurirana kwemunhu ruzivo kuburikidza neInternet kuri panjodzi yako wega. Isu hatina mhaka yekudzivirira chero epachivande marongero kana ekuchengetedza matanho atinopa. Kuchengeteka uye chengetedzo yeruzivo rwako zvinoenderana newe. Iko kwatakakupa iwe (kana kwawakasarudza) password yekuwana zvimwe zvikamu zveSiti yedu, une basa rekuchengetedza password iyi zvakavanzika. Iwe haufanire kugovana password yako nemumwe munhu.
Tinogona kugadzirisa Policy yedu nguva nenguva. Isu tinokuzivisa iwe nezve chero shanduko yechinhu kune ino Yakavanzika Policy nekuisa chiziviso pane yedu Saiti. Tinokukurudzira kuti nguva nenguva utarise kumashure uye ongorora Iyi Bumbiro kuitira kuti iwe uzive chero shanduko dzichangoburwa.
NZIRA YOKUTAURA NESU
Zvekuvanzika Kunetseka. Kana iwe uine chero kunetseka kana kunyunyuta nezve zvakavanzika paSiti, ndapota taura nesu kuplanetlibre Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA kana email pa zvakavanzika@planetlibre.org . Tichaita zvese zvatinogona kuti tikupindure iwe nenzira inokodzera uye nehunyanzvi kuitira kuti upindure mibvunzo yako uye tigadzirise zvinokunetsa. © planetlibre Dhijitari Media, LLC. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Purpleclover uye Purpleclover.com zviratidzo zveplanetlibre Digital Media, LLC
KUZIVA KWAKAVANZIKA KWEVANHU VEKUGARA
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa: Ndira 1, 2020
Ichi CHIVANDIRO CHAKAVANZIKA CALIFORNIA VAGARI vanowedzera ruzivo rwuri mune ino Yakavanzika Policy uye inoshanda chete kune vashanyi, vashandisi, nevamwe vanogara muHurumende yeCalifornia ('vatengi' kana 'iwe'), uye inopa ruzivo maererano nekodzero dzevatengi pasi pe California Consumer Yakavanzika Mutemo we2018 ('CCPA') uye mimwe mimwe mitemo yekuvanzika yeCalifornia. Chero mazwi anotsanangurwa muCCPA ane zvirevo zvakafanana paanoshandiswa muchiziviso ichi.
Isu tinounganidza ruzivo rwunoratidza, rwunoenderana, rwunotsanangura, mareferenzi, runogona kuve rwunobatanidzwa, kana rwunogona kubatanidzwa zvine mutsindo, zvakananga kana zvisina kunangana, nemumwe mutengi kana chishandiso ('ruzivo rwemunhu'). Kunyanya, isu takaunganidza anotevera zvikamu zvemunhu ruzivo nezvevatengi mukati memwedzi gumi nembiri (12) yekupedzisira:
Internet kana zvimwe zvakafanana network basa (senge kubhurawuza nhoroondo)
Geolocation dhata (senzvimbo chaiyo yechigadzirwa chako)
Ruzivo rwevanhu haruna kusanganisira:
Ruzhinji ruripo ruzivo kubva kuhurumende zvinyorwa.
De-inozivikanwa kana akaunganidzwa ruzivo rwevatengi.
Ruzivo rwakabviswa pachiyero cheCCPA, senge:
ruzivo rwehutano kana rwekurapa rwakafukidzwa neHutano Inishuwarenzi Kubatika uye Kuzvidavirira Mutemo wa1996 (HIPAA) uye neCalifornia Confidentiality yeMedical Information Act (CMIA) kana data rekuyedza rekiriniki;
ruzivo rwemunhu rwakafukidzwa nedzimwe nharaunda-yakatarwa mitemo yepachivande, inosanganisira iyo Fair Chikwereti Kuzivisa Mutemo (FRCA), iyo Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) kana California Mari Ruzivo Zvemutemo Mutemo (FIPA), uye Mutyairi Wekuvanzika Kudzivirirwa Mutemo wa1994.
Tinogona kungoerekana tangotora ruzivo rwehunyanzvi uye rwekushandisa kana iwe ukashandisa Saiti yedu kana kusangana nemashambadziro edu epamhepo uye zvemukati, senge rudzi rwechishandiso, bhurawuza, nehurongwa hwekushandisa hwauri kushandisa, yakasarudzika dhizaina yekushandisa, kero yeIP, mudziyo uye bhurawuza marongero. , iwo mawebhusaiti iwe aunoshanyira, ruzivo nezve maonerwo aunoita neSiti yedu uye neyedu echitatu-bato vatinoshanda navo (senge iwo mapeji iwe aunoshanyira), neruzivo rwunotibvumidza isu kuti tione uye tibatanidze chiitiko chako pamidziyo nemawebhusaiti. Tinogona kuziva mudziyo wako kuti tikupe zviitiko zvakasarudzika uye kushambadzira pamidziyo yaunoshandisa.
Ruzivo rweNzvimbo. Isu tinounganidza ruzivo nezve yako kwese nzvimbo, senge nyika yako kana yako IP kero. Isu tinotora iko iko chaiko kwechigadzirwa chako kana iwe uchinge wasvika iyo Saiti nefoni yako mbozhanhare. Haasi ese eruzivo urwu rwakachengetwa, uye kwete rwese urwu ruzivo runosanganisirwa newe.
TINOSHANDISA SEI DZIDZO DZAKO
Isu tinoshandisa ruzivo rwemunhu pachedu nekuda kwezvinangwa zvinotsanangurwa muiyi mutemo kana kuburitswa panguva yekuunganidza kana nemvumo yako, zvinosanganisira zvinotevera zvinangwa:
Kupa, kushambadza, uye kushambadza zvigadzirwa, zvirongwa, uye masevhisi kubva kwatiri neveedu vanobatana navo, uye vezvemabhizinesi vatinogona kunge tichifarira. Tinogona zvakare kushandisa ruzivo rwatinotora kuti tiratidze kushambadza kune vashambadzi vedu vanotarisa vateereri.
Ongorora chitupa chako maererano nezvikumbiro zveCCPA zvakaitwa pazasi.
SOURCES KUBVA KWATINOTANHANYA INFORMATION YAKO
Isu tinounganidza ruzivo rwemunhu pachako otomatiki kubva kumidziyo yako Isu tinoshandisa maturusi ekutsvaga kuunganidza ruzivo kana iwe ukashandisa kana kusangana neSiti, kushambadzira kwedu uye zvemukati zvemukati, uye edu maemail.
Tinogona kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kunowanikwa pachena.
Isu tinowana ruzivo rwemunhu kubva kune vatengesi vatinoshandira kuti vatishandire. Semuenzaniso, vatengesi vanogamuchira kana vanochengetedza mawebhusaiti edu uye vanotumira maemail ekusimudzira isu vanogona kutipa ruzivo.
Tinogona kuwana ruzivo rwemunhu kubva kune mamwe mapato, senge kana vanobatana vekushambadzira kana veshambadziro network vakagovana ruzivo nesu. Tinogona zvakare kugamuchira ruzivo kubva kuSocial Media Sites, sezvakatsanangurwa pamusoro.
zvekuita kana ako maapp achiramba achirovera
TINOGADZANA SEI UYE KUZIVISISA YAKO PAMWE INFORMATION
Tinogona kuzivisa ruzivo rwako pachako kune mamwe mapato kuitira bhizinesi redu. Mumwedzi gumi nembiri yakapfuura, (12), takazivisa chikamu chinotevera cheruzivo rwemunhu pachedu pabasa redu:
Tinogona kuzivisa iri pamusoro chikamu cheruzivo rwemunhu kune edu mabhizinesi zvinangwa kune anotevera mapato emapati:
Vatatu mapato avo iwe kana vamiririri vatipa mvumo yekuzivisa ruzivo rwako pachako maererano nezvigadzirwa kana masevhisi atinokupa.
Mumwedzi gumi nemaviri yapfuura (12), hatina kutengesa chero ruzivo rwemunhu maererano nokunzwisisa kwedu kweCCPA. Iyo Kambani haizotengese yako ruzivo rwemberi mune ramangwana, sekunzwisisa kwedu kweCCPA, isina kukupa ziviso kwauri uye kukupa iwe mukana wekusarudza kubuda panguva iyoyo.
KODZERO DZAKO NESarudzo
CCPA inopa vatengi (vagari veCalifornia) kodzero dzakanangana nezve ruzivo rwavo. Chikamu chino chinotsanangura kodzero dzako dzeCCPA uye chinotsanangura mashandisiro aungaita kodzero idzi.
Kuwana kune Rakananga Ruzivo uye Dhata Portability Kodzero
Une mvumo yekukumbira kuti tikufumurire rumwe ruzivo kwauri nezve kuunganidzwa kwedu uye mashandisirwo eruzivo hwako pamwedzi gumi nemiviri yapfuura. Kana tangogamuchira nekusimbisa chikumbiro chako chevatengi, tichakuzivisa zvimwe kana zvese zvinotevera zvichienderana nechikumbiro chako:
Zvidimbu zvakasarudzika zvemunhu zvakaunganidzwa pamusoro pako (zvinodaidzwa zvakare kuti dhata rinotakurika chikumbiro).
Iwo mapato eruzivo rwemunhu isu takaunganidza pamusoro pako.
Izvo zvikamu zvezvinyorwa zvemunhu ruzivo rwataunganidza pamusoro pako.
Yedu yebhizinesi kana yekutengesa chinangwa chekutora kana kutengesa iwo wega ruzivo.
Iwo mapato ezvimwe mapato atinogovana iwo ruzivo rwemunhu.
Kana isu takatengesa kana kuzivisa ruzivo rwako rwega rwechinangwa chebhizinesi, zvinyorwa zviviri zvakasiyana zvinoratidzira:
kutengesa, kuratidza matunhu eruzivo ega ayo chikamu chega chega chemutengi chakatenga; uye
kuburitswa kwechinangwa chebhizinesi, kuratidza iwo ega ruzivo ruzivo zvikamu izvo chikamu chimwe nechimwe chemubatsiri chakawanikwa.
Kudzima Kumbira Kodzero
Une mvumo yekukumbira kuti tibvise chero ruzivo rwako rwega rwatakatora kubva kwauri tikachengeta, zvichiteerana nezvimwe. Kana tangogamuchira nekusimbisa chikumbiro chako chevatengi, tinodzima (uye tobva tapa vatapi vedu vebasa kuti vadzime) ruzivo rwako pachako kubva kumarekodhi edu, kunze kwekunge paine chisarudzo chinoshanda.
Kushandisa Kuwana, Dhata Kubatika, uye Kudzivisa Kodzero
Kuti ushandise iko kuwana, dhata kutakurika, uye kodzero dzekubvisa dzakatsanangurwa pamusoro, ndokumbira utumire chikumbiro chevatengi kwatiri kana:
Kutidaidza ku: 1-866-522-5025
Kutitumira tsamba pa: zvakavanzika@planetlibre.org
Iwe chete kana munhu waunotendera kuti akuitire iwe, ndiwe unogona kuita chikumbiro chemutengi chine chekuita neruzivo rwako.
Unogona kungoita mutengi chikumbiro chekuwana kana dhata kutakurika kaviri mukati memwedzi gumi nemaviri. Chikumbiro chemutengi chinofanira:
Ipa kero yeemail inoshanda, nhamba yefoni, kero kana rumwe ruzivo rwakakwana rwunotibvumidza kuti tiongorore zvine musoro kuti ndiwe munhu watakaunganidza ruzivo pamusoro pako kana mumiriri ane mvumo.
Tsanangura chikumbiro chako uine ruzivo rwakakwana rwunotibvumidza kuti tinzwisise, kuongorora, uye kuripindura.
Hatigone kupindura kuchikumbiro chako kana kukupa ruzivo rwemunhu kana isu tisingakwanise kuongorora hunhu hwako kana mvumo yemumiriri wako kuita chikumbiro uye kusimbisa ruzivo rwemunhu wega rune hukama newe. Kugadzira chikumbiro chemutengi hakudi kuti iwe ugadzire account nesu. Isu tinongoshandisa ruzivo rwemunhu wega rwakapihwa mukukumbira kwevatengi kuti tione kuti ndiani ari kukumbira kana masimba ekuita chikumbiro.
Nguva Yekupindura uye Fomati
Isu tinoedza kupindura kune chechokwadi chikumbiro chevatengi mukati memazuva makumi mashanu kubva chayagamuchira. Kana isu tichida imwe nguva (kusvika pamazuva makumi mapfumbamwe), isu tinokuzivisa iwe nezve chikonzero uye nekuwedzera nguva mukunyora. Kana iwe uine account nesu, isu tichaendesa edu akanyorwa mhinduro kune iyo account. Kana iwe usina account nesu, isu tinosvitsa mhinduro yedu yakanyorwa neposvo kana zvemagetsi, pane yako sarudzo. Chero kuziviswa kwatinopa kunongovhara iyo gumi nemaviri-mwedzi nguva yakatangira kugashirwa kwechikumbiro. Mhinduro yatinopa ichatsanangurawo zvikonzero zvatisingakwanise kutevedzera chikumbiro, kana zvichibvira. Zvekukumbira kutakurisa dhata, isu tinosarudza fomati yekupa ruzivo rwako rwega runoshandiswa nyore uye runofanira kukubvumidza kuendesa ruzivo kubva kune chimwe chinhu kuenda kune chimwe chinhu pasina chipingaidzo.
Shanduko kune Yedu Yekuvanzika Cherechedzo
Isu tinochengetera kodzero yekugadzirisa ichi chiziviso chezvekuvanzika nekufunga kwedu uye chero nguva. Patinoita shanduko kuichi chiziviso chiziviso, isu tinokuzivisa iwe kuburikidza nechiziviso pane yedu webhusaiti peji rekutanga.
Kana iwe uine chero kunetseka kana kunyunyuta nezve zvakavanzika paSiti, nzira dzatinounganidza nekushandisa ruzivo rwako pachako, sarudzo dzako uye kodzero dzako maererano nekushandisa kwakadai, kana unoshuvira kushandisa kodzero dzako pasi pemutemo weCalifornia, ndapota usazeze kutibata paplanetlibre Digital Media, LLC., Attn: Zvemutemo, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, titumire email pa zvakavanzika@planetlibre.org kana kufona pa1-866-522-5025.
MUTEMO WEMAZANO PAKUSHANDISWA KWENYU NEVANoshandisa
planetlibre Dhijitari Media, LLC d / b / a planetlibre Maindasitiri, ayo anobatana uye anobatsira ('planetlibre', 'isu', 'isu', kana 'edu') anokoshesa zvakavanzika zvevashandisi vedu uye vanyoreri. Isu tinovavarira kuva pachena pamusoro pekuti tinounganidza nekushandisa sei Ruzivo rwako (sekutsanangurwa pazasi), kuchengetedza Ruzivo rwako rwakachengeteka uye kukupa iwe sarudzo dzine musoro. Iyi Yakavanzika Policy ('Policy') inotsanangura zvakavanzika maitiro e www.mundodar webhusaiti (iyo 'Saiti'), iyo iri yavo, uye inoshandiswa, yakazara kana chikamu, naplanetlibre. Iyi Bumbiro inotsanangura kuunganidzwa kwako Ruzivo, mashandisirwo, uye kuburitswa naplanetlibre semutongi wedhata.
Iyi Bumbiro inoshanda kune edu epamhepo ruzivo ruzivo rweSiti maererano nevashandisi vari mukati meEuropean Union. Iyi Bumbiro haishande kune rako dhata rakaunganidzwa kuburikidza chero echitatu-bato mawebhusaiti kana maapplication, kusanganisira mawebhusaiti iwe aunogona kuwana kuburikidza neSiti. Iwo mawebhusaiti uye maapplication anogona kunge aine yavo yega marongero epamoyo, ayo atinokukurudzira kuti uverenge usati wapa chero ruzivo rwemunhu paari kana kuburikidza navo.
Ndokumbirawo kuti muverenge Policy iyi zvakanyatsonaka kuti munzwisise edu marongero nemaitiro zvine chekuita neruzivo rwenyu uye kuti tichazvibata sei Kana iwe usingabvumirani nemitemo yedu nemaitiro, usashandise iyo Saiti. Nekushandisa iyo Saiti, iwe unobvumirana neiyi Policy. Iyi Bumbiro inogona kuchinja nguva nenguva. Kuenderera kwako kwekushandisa kweSiti mushure mekunge taita shanduko kunoonekwa sekugamuchirwa kweshanduko idzi, saka ndokumbira utarise Policy nguva nenguva kuti ivandudzwe.
Yedu Saiti inogarwa muUnited States. Izvi zvinoreva kuti Ruzivo rwatinotora rucharongedzwa nesu muUnited States, nyika ine mwero wakaderera wekuchengetedza dhata rako pachako kupfuura European Union. Nekudaro, isu patinopa Saiti yedu uye masevhisi kuvagari muEuropean Union, planetlibre saka iri zvakare pasi pemitemo yekuEurope yekuchengetedza data, kunyanya iyo EU General Data Protection Regulation (iyo GDPR).
planetlibre ari mubishi rekugadza mumiriri weEU uye anokuzivisa iwe kuburikidza neshanduro yakagadziridzwa yePolisi iyi kana mumiriri weEU agadzwa.
Isu tinoshandisa zviridzwa zvakafanana nezvakajairwa zvibvumirano zvinoenderana neGDPR kana uchichinjisa<
Ruzivo rwako kunze kweEuropean Union kana kune vatatu mapato Tinogona zvakare kudzora kuwanikwa kweSiti kana chero sevhisi kana chigadzirwa chinotsanangurwa paSiti kune chero munhu kana nzvimbo yenzvimbo chero nguva.
VANA PASI PEMAZANA EGORE REGumi nematanhatu
Iyo Saiti haina kuitirwa vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu ekuberekwa, uye isu tisingazive kuunganidza ruzivo rwemunhu kubva kuvana vari pasi pegumi nematanhatu. Kana tikadzidza isu takaunganidza kana kugamuchira ruzivo rwemunhu kubva kumwana ari pasi pemakore gumi nematanhatu pasina ongororo yemvumo yemubereki, isu tinodzima ruzivo irworwo. Kana iwe uchitenda isu tinogona kuve neruzivo kubva kana kana nezvemwana ari pasi pegumi nematanhatu, ndapota taura nesu pa zvakavanzika@planetlibre.org
Tinogona kuunganidza nekubatanidza mhando dzakasiyana dzeruzivo pamwechete, uye pamwe chete kunongedzera kune urwu rwese ruzivo mune ino Yakavanzika Policy se'Ruzivo '. Pazasi nderudzi rweRuzivo rwatinogona kutora.
Mashoko Aunotipa. Tinogona kuunganidza Ruzivo rwaunotipa, sekuti:
paunonyoresa kana kushandisa iyo Saiti, kana kunyorera kune chero sevhisi paSiti, tinogona kukukumbira kuti upe ruzivo rwega nezvekuti ungazivikanwa sei, senge zita, kero yepositi, kero ye-e-mail, nhamba yefoni, kana chero mamwe manyorerwo
isu tinogona kukukumbira iwe kuti upe Ruzivo rwako kana iwe uchipinda mumakwikwi kana sweepstakes inotsigirwa nesu kana kupindura kuongororwa kwatinogona kutumira uye kukumbira kupedzisa paSiti.
paunotaura nesu kuti utaure dambudziko neSiti, kana kuita chero mimwe mibvunzo yakawanda. Tinogona kuchengeta zvinyorwa uye makopi etsamba yako (kusanganisira mae-mail kero, nhamba dzefoni, uye chero rumwe ruzivo rweumwe ruzivo iwe rwawakapa).
Iwe unogona kukwanisa kuwana maficha eSiti kuburikidza nevechitatu mapato enharaunda, maforamu, uye masocial media masaiti, masevhisi, plug-ins, uye mashandisiro ('Social Media Sites'). Zvirongwa zvako zvakavanzika pane akadai maSocial Media Sites, pamwe nehurongwa hwavo hwakavanzika, zvichaona wega uye rumwe ruzivo rungangotorwa nekushandiswa neaya Masocial Media Sites.
Isu tinokwanisa kuwana Ruzivo nezvenzvimbo yako, senge nyika yako, kana iwe uchiipa kana kuburikidza neruzivo rwechigadzirwa (senge IP kero), kana nzvimbo yedhizaini yako paunosvika kuSiti nefoni yako. Pazvinenge zvakakodzera, isu tinongounganidza ruzivo rwakadai nemvumo yako yekutanga.
Ndeipi hwaro hwepamutemo hwatinahwo hwekugadzirisa yako pachako data?
Isu tinongogadzirisa yako yega data kune zviri pamutemo zvinangwa. Iko kushandiswa kwedata rako pachako kucharuramiswa pahwaro hweimwe kana dzakawanda dzemutemo 'nzvimbo dzekugadzirisa' izvo zvinopihwa muEU General Data Kudzivirirwa Regulation (iyo GDPR).
Tafura iri pazasi ine tsananguro yehukuru hwenzvimbo dzakasiyana siyana dzekugadziriswa kwepamutemo dzinowanikwa pasi peGDPR iyo planetlibre inovimba nayo kana ichiunganidza Ruzivo:
Chibvumirano chinoitwa: kwatinoda yako data rako pachako kuti upinde muchibvumirano newe uye nekukupa masevhisi kwauri.
Zvinodiwa zviri pamutemo: kwatinoshandisa yako data rako pachako kuti uwane kufarira kuri pamutemo uye zvikonzero zvedu zvekuishandisa zvinopfuura chero rusaruro kukodzero dzako dzekuchengetedza data.
Zvepamutemo zvirevo: iko kupi kwako pachako data kuchikosha kwatiri kuti tidzivirire, kupomera kana kuita chikumbiro chakanangana newe, isu kana wechitatu bato.
Zvatinosungirwa zviri pamutemo uye kodzero: kwatinosungirwa kugadzirisa yako pachako data pasi pechisungo chepamutemo mukati meEU.
Mvumo: kwawakabvuma kushandisa kwedu data rako rega (mune iyo kesi unenge wakapihwa fomu rekubvuma zvine chekuita nechero kushandisa kwakadai uye unogona kubvisa mvumo yako chero nguva nekupa ziviso ku zvakavanzika@planetlibre.org
Kupa zvigadzirwa zvedu nemasevhisi:
Isu tinoshandisa Ruzivo rwatinotora pamusoro pako kuzadzisa zvikumbiro zvako zvezvigadzirwa, kunyorera, masevhisi, uye zvemukati uye nekupa, kukudziridza, kuchengetedza, kugadzirisa, kuchengetedza, uye kugadzirisa ruzivo rwako nezvipo zvedu. Semuenzaniso, isu tinoshandisa Ruzivo rwunounganidzwa pamasaiti edu ku (i) kupa zvirimo, zvigadzirwa, masevhisi, uye zvigadziriso (ii) kupa zviziviso nezveakaundi yako kana kunyoreswa, (iii) kukugonesa kuverenga nekutumira zvirevo, kana (iv) kugonesa iwe kupinda kukwidziridzwa, makwikwi, uye sweepstakes.
Kugadzira Ground Pasi peGDPR:
Kuzadzisa zvibvumirano nezvibvumirano zvepamutemo; uye nemvumo yako (pazvinodiwa)
Zvido zvepamutemo (pazvinenge zvakakodzera)
Kuvandudza nekugadzira zvigadzirwa zvitsva nemasevhisi; kuwedzera kushanda zvakanaka; kudzivirira kubva mukubiridzira; kuchengetedza ako ekare ekushandisa ruzivo rwezvigadzirwa uye / kana masevhisi iwe aunogona kunge wakatenga kana kufarira, kuitira kuti vakuratidze kwauri zvimwe zvigadzirwa zvingave zvinonakidza.
Isu tinoshandisa Ruzivo rwatinounganidza ku (i) kukutumira ruzivo nezve kukwidziridzwa, kupihwa, uye maficha edu, (ii) kupa kushambadza kunoenderana nezvako uye nzvimbo, (iii) kuita zvinhu zvinofambidzana, zviitwa, uye Masocial Media Sites kupa iwe uine, kana kubvumidza iyo Social Media Sites kuti ikupe iwe kushambadza zvinoenderana nezvaunofarira, (iv) pano neapo tinoshandisa Ruzivo urwu kupa, kushambadza, kana kushambadza zvigadzirwa, zvirongwa, kana masevhisi kwauri kubva kwatiri uye edu edu vanobatana, bhizinesi. vadyidzani, uye vakasarudzwa vechitatu mapato, kana (v) kwatiri nevatinoshamwaridzana navo, bhizinesi vatinoshanda navo, uye sarudza vechitatu mapato kunongedza, kupa, kana kushambadzira zvigadzirwa, zvirongwa, kana masevhisi angave anofadza kwauri.
Zvinodiwa zvepamutemo uye nemvumo yako (pazvinodiwa)
Kusimudzira zvigadzirwa zvedu nemasevhisi kune vashandisi vedu, zvinopa zvakatemwa zvinopihwa, mikana nemasevhisi angave ekufadza iwe.
Isu tinoshandisa Ruzivo nezvewe kutaura newe, senge (i) kukuzivisa iwe kana iwe uchinge wahwina mumwe wemakwikwi edu kana sweepstakes kana patinoita shanduko kumatongerwo edu kana mazwi, (ii) kupindura mibvunzo yako, kana (iii) ) kuti ndikubate nezve account yako.
Kupa uye / kana kutaurirana ruzivo rwakakosha; kuwedzera kushanda zvakanaka; kugadzirisa, kugadzirisa, kana kuvandudza masevhisi matsva uye zvigadzirwa; kuunganidza manhamba.
Nezvinangwa zvekuchengetedza uye kuongorora uye nekuenderera mberi nekuvandudza maSites uye masevhisi.
Isu tinoshandisa ruzivo rwekushandisa uye rwekushandisa kunatsiridza dhizaini yedu, mashandiro uye zvirimo uye kutigonesa kugadzirisa ruzivo rwako nezviri mukati medu nezvipo. Isu tinoshandisa Ruzivo urwu (i) kupa, kuvandudza, kuchengetedza, kugadzirisa, kuchengetedza, uye kugadzirisa zvigadzirwa zvedu, kunyorera, uye masevhisi, uye kushandisa bhizinesi redu, (ii) kuita analytics, kusanganisira kuongorora uye kurondedzera mashandisiro uye mashandiro , (iii) kudzivirira kubva, kuziva, nekudzivirira kubiridzira uye zvimwe zvisiri pamutemo, (iv) kugadzira data rakabatanidzwa pamusoro pemapoka kana zvikamu zvevashandisi vedu, uye (iv) kudzivirira kubiridzira.
Kuzadzisa zvibvumirano nezvibvumirano zvepamutemo, zvido zviri pamutemo, uye nemvumo yako (pazvinodiwa)
Kuongorora ruzivo kubva kushanyo dzako uye kudyidzana neSites kuti uve nekunzwisisa kuri nani mashandisiro avo kuti tikwanise kukudziridza ruzivo rwevashandisi.
Kushambadzira ne uye nevechitatu-bato social network.
Isu tinoshandisa Ruzivo rwako kana iwe uchifambidzana neyechitatu bato social network maficha ekushandira iwe nezviziviso uye kusangana newe kune wechitatu bato social network. Unogona kudzidza zvakawanda nezvekuti mashandiro aya anoshanda sei, dhata rehuwandu iyo yatinowana nezvako, uye nekuona nzira yekusarudza kubuda nekuongorora zviziviso zvevamwe zvevanhu vechitatu vezvemagariro.
Chido chepamutemo, uye nemvumo yako sezvatakapihwa nesu kana chero yechitatu bato pasocial network (pazvinodiwa)
Kuongorora ruzivo kubva kushanyo dzako nekudyidzana nemaSites kuti tinzwisise zvirinani mashandisiro avo kuitira kuti isu tigone kuvandudza ruzivo rwevashandisi, kupa zvinowirirana, mikana uye masevhisi angave anokufadza.
Kuteerera uye kuchinja bhizinesi chimiro.
Isu tinoshandisa Ruzivo rwatinounganidza kuti tione, kuongorora, uye kudzivirira zviitiko zvinokanganisa mazwi edu ekushandisa, zvinogona kuve zvekunyepedzera, kutyora kodzero, kana mimwe mitemo, kutevedzera zvinodiwa nemutemo, uye kuchengetedza kodzero dzedu uye kodzero uye kuchengetedzeka kwevashandisi vedu. nevamwe. Isu tinogona zvakare kupa yako pachako data kune chero anokwanisa kuwana kana investor mune chero chikamu chebhizimusi replanetlibre nekuda kwekuwana iko kutora kana kudyara.
Kuzadzisa zvibvumirano nezvibvumirano zvepamutemo
Kuchengetedza kwedu bhizinesi zvido, chivakwa uye dzimwe kodzero, kuchengetedza zvakavanzika, kuchengetedzeka uye dzimwe kodzero dzeveruzhinji.
planetlibre inodzora Ruzivo rwako uye inoonekwa sedhairekita yedata sekutsanangurwa muGDPR. Isu tinogona kugovana uye kuburitsa yakaunganidzwa uye de-yakaziviswa Ruzivo nezve vashandisi vedu pasina kurambidzwa.
Kwatinobata vanogadzira dhata vanogadzira dhata rega kunze kweEEA tichaona kuti kuchave nedanho rakakodzera rekudzivirira. Pamusoro pezvo, tichaisa zvidziviriro zviri pamutemo zvinotungamira kuchinjisa kwakadai, semidziyo yakafanana nezvikamu zvemakondirakiti, kubvumidzwa kwevanhu, kana zvimwe zvikonzero zviri pamutemo zvinotenderwa nezvinodiwa zviri pamutemo.
Dzimwe nyika dziri kunze kweEEA dzakatenderwa neEuropean Commission sekupa zvidziviriro zvakaenzana seEEA mitemo yekuchengetedza dhata. EU dziviriro yedata mitemo inobvumidza planetlibre kuendesa zvakasununguka dhata yega kune dzakadai nyika. Ndapota taura nesu pa zvakavanzika@planetlibre.org kana iwe uchida kuona kopi yezvidziviriro zvatinoshandisa maererano nekutengeswa kwedata rako rega.
Vanopa Sevhisi . Isu takaita zvinotevera zvikamu zvevanogadzira dhata izvo zvinogadzira dunhu rega pachinzvimbo chedu: vedu kontrakita, vanopa rubatsiro, vanopa zvemukati, uye vamwe vatatu mapato atinoshandisa kutsigira bhizinesi redu vanogona kuwana Ruzivo kuti vabatsire kuita masevhisi avari kuita kwedu, kusanganisira: kugadzira, kuchengetedza, kubata, uye kuendesa maSites edu, zvigadzirwa, uye masevhisi; kuitisa kushambadzira (semuenzaniso kukupa iwe yakanangwa kushambadza nemvumo yakakodzera); kubata kubhadhara, email uye kuzadzikiswa kupa makwikwi; kuitisa tsvagiridzo uye analytics; uye vatengi.
Sponsors uye co-kukwidziridzwa . Isu dzimwe nguva tinopa zvemukati kana zvirongwa (semuenzaniso, makwikwi, sweepstakes, kukwidziridzwa, kana kusangana kweMidhiya Saiti Saiti) izvo zvinotsigirwa kana kuisirwa zita nevechitatu mapato. Nekuda kwehukama uhu, mapato echitatu anounganidza kana kuwana Ruzivo kubva kwauri kana iwe uchiita chiitiko ichi. Hatina simba pamusoro pevanhu vatatu ava vanoshandisa ruzivo urwu. Tinokukurudzira kuti utarise kuvanzika kwekuvanzika kwechero wechitatu bato kuti udzidze nezve yavo data maitiro usati watora chikamu muchiitiko ichi.
Sites Dzakabatanidzwa . Mamwe maSite ane zvinongedzo kune mamwe masayiti, kusanganisira Social Media Sites. Tinogona kusanganisa yemagariro midhiya yekushandisa chirongwa chinosangana kana plug-ins ('Plug-ins') kubva pasocial network, kusanganisira Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest nevamwe, mumaSites edu. Plug-ins inogona kuendesa ruzivo nezve iwe kune iyo plugg-in yacho inoteerana chikuva pasina chiito newe. Ruzivo urwu runogona kusanganisira yako chikuva mushandisi yekuzivisa nhamba, ndeipi webhusaiti iwe yauri, uye zvimwe. Kupindirana nePulagi-mukati kunofambisa ruzivo kwakanangana neiyo plug-in yemagariro network uye iro ruzivo runogona kuoneka nevamwe papuratifomu. Plug-ins inodzorwa neakazvimiririra epuratifomu mutemo, uye kwete nePolisi yedu.
Zvemutemo uye Kuteedzera Kwemutemo Zvinangwa . Tinogona kuzivisa Ruzivo mukupindura maitiro epamutemo, semuenzaniso mukupindura kudare redare kana sabhuku, kana kupindura chikumbiro cheanosungira mutemo. Tinogona zvakare kuzivisa ruzivo irworwo kune vechitatu mapato: (i) nechinangwa chekudzivirira kubiridzira uye kudzikisira njodzi, (ii) kwatinotenda kuti zvakakosha kuongorora, kudzivirira, kana kutora matanho maererano nezviito zvisiri pamutemo, (iii) kusimbisa kodzero dzedu dzinobva kune chero zvibvumirano zvakapinda pakati pako nesu, kusanganisira Mitemo yekushandisa, Mutemo uyu, uye kubhadhara uye kuunganidza, (iv) kana tichitenda kuti kuzivisa kunokosha kana kuti kwakakodzera kuchengetedza kodzero dzedu, chivakwa, kana kuchengetedzeka kana izvozvo yevatengi vedu, vashandisi, makondirakiti kana vamwe, (v) sezvimwe zvinodiwa nemutemo.
Kushambadzira Kutaurirana uye Kugovana neVatatu Mapato. Kana iwe wakanyorera kuti ugamuchire tsamba dzetsamba uye / kana ruzivo rwekushambadzira, une mukana wekusarudza zvaunofarira zvine chekuita nekugamuchira kutaurirana kwekushambadza kubva kwatiri, uye kugovana kwedu Ruzivo nevatinoshanda navo nekuda kwavo kwekushambadzira.
chitoro changu chemaapuro hachisi kushanda
Unogona kugadzirisa zvaunofarira zvine chekuita nekugamuchira kumwe kutaurirana kwekushambadzira kubva kwatiri, uye kugovana kwedu ruzivo rwemunhu wega nevechitatu mapato. Unogona kuzviita nekutibata nesu pa zvakavanzika@planetlibre.org . Iwe unogona zvakare kusarudza kubva mukugamuchira email kushambadzira kutaurirana, nekutevera iyo 'kuzvinyoresa' mirairo yakapihwa mune yega email yaunogamuchira kubva kwatiri. Iwe unogona zvakare kugadzirisa ako ekushambadzira Notices pane yako nhare mbozha kuburikidza neyako kifaa kana app magadziriro.
Ad Sarudzo . Isu tinogona kushanda nevechitatu mapato kuzivisa kushambadzira, uye kuita mukuunganidza dhata, kuburitsa, saiti analytics, kushambadzira kushambadzira uye kuyera kupindura kumaSites edu uye kune echitatu webhusaiti uye kunyorera kwenguva. Aya mapato echitatu anogona kushandisa makuki, web beacon, pixels, uye humwe hunyanzvi hwakafanana kuita chiitiko ichi. Ivo vanogona zvakare kuwana ruzivo nezve mawebhusaiti iwe aunoshanyira, kunyorera iwe kwaunoshandisa, uye rumwe ruzivo kubva kune ako mabhurawuza nemidziyo kuitira kuti uburitse kushambadza uko kungave kunoenderana kune zvaunofarira mukati nekubvisa maSiti edu uye kune mamwe mapuratifomu. Rudzi urwu rwekushambadzira inozivikanwa sekufarira-kwakavakirwa kushambadzira, uye inogona kushandiswa kusanganisa akasiyana mabrowser uye zvishandiso pamwechete nechinangwa chekufarira-kwakavakirwa kushambadzira uye analytics.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kufarira-kwakavakirwa kushambadza pane desktop yako kana nharembozha, uye kugona kwako kusarudza kunze kwerudzi urwu rwekushambadzira nevechitatu mapato, ndapota shanya Sarudzo dzako dzepamhepo uye / kana EDAA Yekuzvidzora-Initiative yeOnline Maitiro Ekushambadzira . Ndokumbira utarise kuti chero sarudzo dzekusarudza dzaunogona kushandisa kuburikidza nezvirongwa izvi dzinongoshanda chete kushambadziro-kwakavakirwa kushambadziro nevechitatu mapato aunosarudza. Iwe unogona zvakare kuenderera nekugamuchira kushambadzira, asi kushambadza kwacho kunogona kunge kusinei nezvavanofarira.
Unogona kuve nezvimwe sarudzo zvichibva nesystem yako kana nhare mbozha. Mazhinji masisitimu anoshanda ekushandisa anopa avo pachavo mirairidzo pamusoro pekuti ungadzikise kana kuvharira kuendesa kwekushambadzira kwe-mu-kushambadzira. Unogona kuongorora marongero epachivande mune yakadaro sisitimu yekushandisa kuti udzidze nezve kudzikisira kwekushambadzira kwe-mu-kushambadzira. Iwe unogona zvakare kudzima chaiyo chaiyo nzvimbo ruzivo kubva kune nhare mbozha kuburikidza neyako nhare mbozha masethingi uye sarudza kudzora iko kuunganidzwa.
NZIRA DZOKUGADZIRA VASHANDI veEU
Cookies uye Humwe Technologies . Isu, nevatinoshamwaridzana navo, vanopa rubatsiro rwechitatu, uye vatinoshanda navo bhizinesi vanogona kutumira 'makuki' kukomputa yako kana kushandisa matekinoroji akafanana kusimudzira ruzivo rwako rwepamhepo pane edu maSites uye kuburikidza nekushambadzira kwedu uye midhiya paInternet uye nharembozha.
Cookies mafaera madiki emanyoro ane ruzivo runotorwa pasi kune chako chishandiso paunoshanyira webhusaiti, kusanganisira maSites edu. Cookies anobva adzoserwa kunzvimbo yekutanga yewebhu pane ako anotevera kushanya kune iyo duraini. Mazhinji mapeji ewebhu ane zvinhu kubva kunzvimbo dzakawanda dzewebhu saka paunoshanyira webhusaiti, bhurawuza rako rinogona kugamuchira makuki kubva kune akati wandei masosi. Cookies anobatsira nekuti anotendera webhusaiti kuziva mudziyo wemushandisi. Cookies inokutendera kuti ufambe mawebhusaiti zvakanaka, rangarira zvaunofarira uye kazhinji kugadzirisa ruzivo rwevashandisi. Izvo zvinogona zvakare kushandiswa kugadzirisa kushambadzira kune zvaunofarira kuburikidza nekuteedzera kubhurawuza kwako kune mamwe mawebhusaiti. Session makuki anobviswa otomatiki kana iwe ukavhara browser rako uye zvinoramba makuki zvinogara pane chako chishandiso mushure bhurawuza ravharwa (semuenzaniso kurangarira zvaunofarira zvemushandisi paunodzokera kuSites).
Tinogona zvakare kushandisa mapikiseli kana 'web mabacon' ayo anoongorora mashandisiro ako maSites. Web beacon madiki emagetsi mafaira akabatanidzwa muSites kana kutaurirana kwedu (semuenzaniso maemail) anotibvumidza isu, semuenzaniso, kuverenga vashandisi vakashanyira iwo mapeji kana kuvhura email kana kune zvimwe zvinoenderana manhamba. Tinogona zvakare kusanganisa 'Software Development Kits' ('SDKs') mune edu mashandiro ekuita zvakafanana mabasa sekuki uye web beacon. Semuenzaniso, ma SDK anogona kutora ruzivo rwehunyanzvi uye rwekushandisa senge masisitimu enharembozha nekubatana kwako neSiti uye nemamwe maapplication efoni.
Tinogona zvakare kushandisa makuki uye mamwe matekinoroji (i) kupa, kuvandudza, kuchengetedza, kugadzirisa, kuchengetedza, nekuvandudza maSites, zvigadzirwa, zvirongwa, nemasevhisi uye kuita bhizinesi redu, (ii) kuita analytics, kusanganisira kuongorora uye taura nezvekushandiswa uye mashandiro eSiti uye zvigadzirwa zvekushambadzira, (iii) kudzivirira kubva, kuona, nekudzivirira kubiridzira uye zvimwe zvisiri pamutemo, (iv) kugadzira data rakabatana pamusoro pemapoka kana zvikamu zvevashandisi vedu, (v) kuwiriranisa vashandisi. pamidziyo yese, vanobatana navo, vezvemabhizimusi, uye sarudza vechitatu mapato, uye (vi) kwatiri nevatinoshamwaridzana navo, vatinoshanda navo bhizinesi, uye sarudza vechitatu mapato kunongedza, kupa, kana kutengesa, zvigadzirwa, zvirongwa, kana masevhisi. Cookies uye mamwe matekinoroji zvakare anofambisa uye kuyera mashandiro ezviziviso zvinoratidzwa kana kuendeswa nesu kana / kuburikidza nesu uye / kana mamwe maratidziro kana saiti.
Isu parizvino hatipindure kune Usateedzere masaini nekuti yunifomu tekinoroji mwari haisati yagadzirwa. Isu tinoramba tichiongorora matekinoroji matsva uye tinogona kutora chiyero kana imwe yagadzirwa.
Kugadzirisa Cookies uye Dzimwe Technologies.
Izvi makuki zvakakosha kuitira kuti ukwanise kutenderera maSites uye kushandisa maficha. Pasina makuki aya, masevhisi awakumbira (senge kufamba pakati pemapeji) haakwanise kupihwa. Iyi tafura inotevera inoratidza mimwe yemhando dzekuki idzi:
Isu tinoshandisa analytic makuki kuongorora mashandisiro anoita vashanyi vedu maSites uye kuongorora mashandiro avo. Izvi zvinotibvumidza isu kuti tipe chiitiko chepamusoro-soro nekugadzirisa yedu yekupa uye nekukurumidza kuona nekugadzirisa chero nyaya dzinomuka. Semuenzaniso, isu tinogona kushandisa mashandiro emakuki kuti tione kuti ndeapi mapeji anonyanya kufarirwa, ndeipi nzira yekubatanidza pakati pemapeji inonyanya kushanda, uye kuona kuti nei mamwe mapeji achigamuchira mameseji ekukanganisa. Tinogona zvakare kushandisa aya makuki kusimudzira zvinyorwa kana maseiti 'masevhisi atinofunga kuti achakufarira iwe zvichienderana nekushandisa kwako maSites. Idzo ruzivo rwunounganidzwa nekuki idzi harwunobatanidzwa nerako ruzivo rwepamoyo nesu kana nemakontrakta edu uye runongoshandiswa mune yakazara uye de-inozivikanwa fomu. Iyi tafura inotevera inoratidza mimwe yemhando dzekuki idzi:
Unogona kusarudza kutevera neGoogle Analytics nekushanya: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .
Dzvanya apa kuti uone Yekuvanzika yeMouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
Isu tinoshandisa makuki kukupa iwe nekumwe kushanda. Semuenzaniso, kutarisa zvemukati mevhidhiyo, hova dzinorarama, kana kuyeuka sarudzo dzaunoita uye nekupa zvinowedzeredzwa uye zvimwe zvemunhu maficha. Aya makuki haana kushandiswa kuteedzera kubhurawuza kwako pane mamwe masaiti. Iyi tafura inotevera inoratidza mimwe yemhando dzekuki idzi:
Kushambadzira makuki (kana kunanga makuki) unganidza ruzivo nezve maitiro ekubhurawuza ane chekuita neyako kifaa uye anoshandiswa kuita kushambadza kuve kwakakodzera iwe uye zvaunofarira. Aya makuki zvakare anoyera kushanda kwekushambadzira mishandirapamwe uye nekuteedzera kana kushambadza kwakaratidzirwa nemazvo. Iwe unogona kuwana iyo EU Chibvumirano maneja pazasi peSites kana iwe uchishuvira kuchinja ako mvumo zvaunofarira. Iyi inotevera rondedzero inoratidza mimwe mienzaniso yemhando idzi dzekuki.
Cookie Kunobva: DoubleClick:
iphone 6 mabhatani asiri kushanda
Kushambadzira maKuki muLinked Sites
Kushambadzira maKuki anogona kushandiswa nemasocial media masaiti akasunganidzwa kubva kuSiti yedu, akadai se'Govana 'mabhatani kana emitambo yakamisikidzwa / vhidhiyo vatambi, pamusoro pekupa iko kukumbira mashandiro. Masocial media masaiti anopa aya masevhisi kudzoserwa kwekuziva kuti iwe (kana zvakaringana mudziyo wako) wakashanyira mamwe mawebhusaiti. Aya masocial media masosi anoisa pasi kushambadzira makuki zvese kana iwe uchishanyira maSites edu uye kana iwe ukashandisa masevhisi avo uye kufamba uchibva kumaSites edu. Maitiro ekuki ezvimwe zveaya masaiti enhau akarongwa pazasi:
KODZERO DZAKO KUSVIRA, KURURamisa UYE KUSVIRA ZITA RAKO
Une kodzero yekutikumbira kopi yako Ruzivo, kurigadzirisa, kuridzima kana kudzora mashandisirwo aro, uye kuwana Ruzivo rwawakapa. Iwe unogona zvakare kutibvunza isu kuendesa rumwe Ruzivo iwe rwawakapa kune wechitatu bato zvemagetsi.
Une mvumo yekupokana nekugadziriswa kwemunhu ruzivo maererano nezvatinoda zviri pamutemo. Iko kwatakakumbira mvumo yako yekugadzirisa Ruzivo, une mvumo yekubvisa iyi mvumo chero nguva.
Kana uine zvinetswa zvisina kugadziriswa, une mvumo yekunyunyuta kuEU kuchengetedza simba rekuchengetedza kwaunogara, kushanda kana kwaunotenda kuti kutyora kunogona kunge kwakaitika. Ndokumbira kuti muzive kuti kumwe kusarudzika kunoshanda mukushandiswa kwekodzero idzi uye nekudaro ungangotadza kushandisa kodzero idzi dzose mumamiriro ese ezvinhu.
Kodzero idzi dzinoenderana nezvimwe zvinoregererwa kuchengetedza zvido zveruzhinji (semuenzaniso kudzivirira kana kuona mhosva) nezvatinoda (semuenzaniso, kuchengetedza kodzero yepamutemo). Mune zvimwe zviitiko, izvi zvinogona kureva kuti isu tinokwanisa kuchengeta Ruzivo rwako kunyangwe iwe ukabvisa mvumo yako. Tichapindura kune zvakawanda zvikumbiro mukati memwedzi mumwe.
Iwe unogona kuzvinyoresa kubva kune chero matsamba enhau kana akasiyana emaemail ekushambadzira chero nguva nekudzvanya pane izvo 'kuzvinyoresa' zvinongedzo zvinopihwa mune akadaro kutaurirana. Iwe haugone kubuda mukutaurirana zvine chekuita neSiti, senge kuoneswa kweakaundi, zvisimbiso zvekutenga uye mameseji ekutungamira, chero bedzi iwe wakanyoreswa neSites.
Nguva dzedu dzekuchengetedza dhata rako pachako dzinoenderana nezvinodiwa zvebhizinesi uye zvinodiwa nemutemo. Isu tinochengeta rako pachako data sekureba sekukosha kwaro kwekugadzirisa chinangwa (s) icho icho chaicho data chakaunganidzwa, uye chero chimwe chinotenderwa, chakanangana nechinangwa. Semuenzaniso, isu tinochengetedza mamwe manhamba ekutengeserana uye tsamba kusvika pakatarwa nguva yezvikwereti zvichibva mukutenga kwapera, kana kutevedzera zvinodiwa nemitemo maererano nekuchengetwa kwedata rakadai.
Isu takaita matanho akakodzera ehunyanzvi uye esangano kuchengetedza kugadziriswa kwemunhu data. Idzi dziviriro dzinosiyana zvichienderana nekunzwisisa, fomati, nzvimbo, huwandu, kugoverwa uye kuchengetwa kwedata rako pachako, uye zvinosanganisira matanho akagadzirirwa kuchengetedza dunhu rako rakadzivirirwa kubva mukuwana mvumo.
Isu tinodzora kupinda kune rako pachako data kune vashandi uye vechitatu mapato anoda mukana wekuwana ruzivo rwakadai kune ari pamutemo, akakodzera mabhizinesi zvinangwa.
Vose vevashandi vedu, makondirakiti uye vechitatu mapato vanozove nekwaniso yedata remunhu pachirairo chedu vanozosungirwa kuve zvakavanzika uye isu tinoshandisa kuwana kwekudzora kudzora kuwana kune vanhu vanoda mukana wakadaro wekuita kwavo mabasa uye mabasa.
Isu tine ruzivo rwekuchengetedzwa kwemitemo munzvimbo uye maitiro ayo ekuchengetedza uye masisitimu anowanzo kuongororwa. Isu tinotora chengetedzo yeedu IT zvivakwa zvakanyanya.
Kunyangwe isu tichitora matanho anodzivirira kuchengetedza ruzivo rwako, hatigone kuvimbisa kuchengetedzeka kwemashoko ako ega. Chero kuendesa ruzivo rwemunhu wega kuburikidza neInternet uye nharembozha haina kuchengetedzeka zvakakwana, uye nekudaro, chero kuendesa kwemunhu ruzivo kuri panjodzi yako wega. Isu hatina mhaka yekudzivirira chero epachivande marongero kana ekuchengetedza matanho atinopa.
Kuchengeteka uye chengetedzo yeruzivo rwako zvinoenderana newe. Iko kwatakakupa iwe (kana kwawakasarudza) password yekuwana kune zvimwe zvikamu zveSites, une basa rekuchengetedza password iyi zvakavanzika. Iwe haufanire kugovana password yako nemumwe munhu.
Tinogona kugadzirisa Policy yedu nguva nenguva. Isu tinokuzivisa iwe nezve chero shanduko yechinhu kune ino Yakavanzika Policy nekuisa ziviso kumaSiti edu. Tinokukurudzira kuti nguva nenguva utarise kumashure uye ongorora Iyi Bumbiro kuitira kuti iwe uzive chero shanduko dzichangoburwa.
Zvekuvanzika Kunetseka . Kana iwe uine chero kunetseka kana kunyunyuta nezve zvakavanzika paSites, ndapota taura nesu kuplanetlibre Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thPasi, East Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. kana email pa privacy@planetlibre.org. Tichaita zvese zvatinogona kuti tikupindure iwe nenzira inokodzera uye nehunyanzvi kuitira kuti upindure mibvunzo yako uye tigadzirise zvinokunetsa.
© planetlibre Dhijitari Media, LLC. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. planetlibre neplanetlibre.es zvakanyoreswa mazita emakambani eplanetlibre Digital Media, LLC